Tsamba Yechitatu yaJohani 1:1-14
Kwaziso uye munyengetero (1-4)
Kurumbidza Gayo (5-8)
Dhiyotrefesi anoda chinzvimbo (9, 10)
Dhemetriyo anopupurirwa zvakanaka (11, 12)
Kuronga kushanya uye kwaziso (13, 14)
1 Ini murume mukuru* ndiri kunyora kuna Gayo anodiwa, wandinonyatsoda. 2 Mudikani, ndinonyengetera kuti urambe uine utano hwakanaka uye uchibudirira muzvinhu zvese, sekubudirira kwauri kuita* iye zvino. 3 Nekuti ndakafara kwazvo pakauya hama dzikataura nezvekubatisisa kwako chokwadi, sezvo uchiramba uchifamba muchokwadi.+ 4 Hapana chinondifadza* kupfuura kunzwa kuti vana vangu vari kuramba vachifamba muchokwadi.+ 5 Mudikani, uri kuratidza kuti wakatendeka nezvaunoitira hama dzako, kunyange zvazvo usingadzizivi.+ 6 Dzakapupura nezverudo rwako pamberi peungano. Ndinokumbirawo kuti uonekane nadzo zvakanaka nenzira yakakodzera kuna Mwari.+ 7 Nekuti dziri kufamba nekuda kwezita rake, dzisingatori chinhu+ kuvanhu vemamwe marudzi. 8 Saka tinofanira kugamuchira vanhu vakadaro zvakanaka,+ kuti tishande pamwe chete muchokwadi.+ 9 Ndine zvandakanyorera ungano, asi Dhiyotrefesi uyo anoda kuva nechinzvimbo chepamusoro pakati pavo,+ haana chaanoremekedza pane zvese zvatinotaura.+ 10 Saka kana ndikauya ndichafumura zvaari kuita zvekuparadzira mashoko akaipa pamusoro pedu.+ Haangogumiri ipapo, asi anotoramba kugamuchira hama+ zvakanaka; uye anoedza kurambidza vaya vanoda kudzigamuchira, achiedza kuvabvisa muungano. 11 Mudikani, usatevedzera zvinhu zvakaipa, asi tevedzera zvinhu zvakanaka.+ Munhu anoita zvakanaka anobva kuna Mwari.+ Uya anoita zvakaipa haana kuona Mwari.+ 12 Dhemetriyo ari kupupurirwa zvakanaka navo vese uye chokwadi chinomupupurirawo. Nesuwo tiri kutomupupurira, uye iwe unoziva kuti mashoko edu ndeechokwadi. 13 Ndaiva nezvinhu zvizhinji zvekukunyorera, asi handidi kuramba ndichiita zvekukunyorera neingi nepeni. 14 Zvisinei, ndiri kutarisira kukuona munguva pfupi, uye tichataura tichinyatsoonana. Iva nerugare. Shamwari dziri kukukwazisa. Undikwazisirewo shamwari nemazita adzo.
^ Kana kuti “kuri kuita mweya wako.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “chinoita kuti nditende.”